Amazwe amaningi amisa izindiza zamazwe ngamazwe ngokuhlukile okusha kwe-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Amazwe amaningi amisa izindiza zamazwe ngamazwe ngokuhlukile okusha kwe-COVID-19
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
UMongameli we-European Commission (EC) u-Ursula von der Leyen, namuhla, unxuse ngokuphuthumayo ukuthi konke ukuhamba ngezindiza ukuya nokubuya emazweni anamacala abikiwe ohlobo olusha lwe-COVID-19 ukuthi kukhanselwe kuze kube uhulumeni nezikhulu zezempilo sebebuqonda kangcono ubungozi obusha. ukuhlukahluka kwegciwane.
IDenmark, iMorocco, iPhilippines kanye neSpain sekuphenduke amazwe akamuva ukubeka imingcele yokuhamba kukho konke ukuhamba okungabalulekile.o INingizimu Afrika kanye nezifunda ezingomakhelwane, ngokujoyina uhlu olukhulayo lwamazwe anezingqimba ngaphezulu kohlobo lwe-COVID-19 oluthi 'super mutant'.
The iyuniyani yase-EuropeIsimemezelo size ngemuva kokuthi iDenmark neSpain bejoyine amanye amazwe ase-Europe ekunciphiseni uhambo lokuya esifundeni, kanti emazweni angaphandle, iMorocco nePhilippines bathathe izinyathelo ezifanayo zokukhawulela ukuhamba kweqembu lamazwe athathwa njengengcuphe.
IJalimane imemezele Iningizimu Afrika "indawo ehlukile ngegciwane," ungqongqoshe wezempilo wezwe uJens Spahn wabhala kuTwitter. Kusho ukuthi "izindiza zizovunyelwa kuphela ukuthutha amaJalimane" zisuka ezweni.
Bonke abafikayo kuzodingeka ukuthi bahlaliswe bodwa izinsuku eziyi-14, noma ngabe sebegonywe ngokuphelele i-COVID-19 noma sebeluleme, kusho uSpahn.
Iziphathimandla zaseDutch zenze okufanayo, zamemezela ukuvalwa kwezindiza ezisuka eNingizimu Afrika ziya eNetherlands kusukela phakathi kwamabili.
I-Italy neCzech Republic nazo zashesha ukulandela ezinye izizwe zaseYurophu ekubekeni imingcele.
IRome ivimbele ukungena kubo bonke abafika eNingizimu Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia nase-Eswatini. IPrague iphinde yathi abangebona abomdabu abasanda kuvakasha eNingizimu Afrika ngeke bavunyelwe ukungena eCzechia.
Kamuva emini, iFrance yathi izomisa izindiza ezisuka eningizimu ye-Afrika okungenani amahora angama-48, lapho uNgqongqoshe Wezempilo u-Olivier Veran ememezela ukuthi bonke abasanda kufika bevela esifundeni bazohlolwa futhi baqashwe ngeso lokhozi.
UNdunankulu waseFrance uJean Castex udalule ukuthi izingxoxo phakathi kwabaholi be-EU mayelana nendlela yokusabela kulolu hlobo olusha, olungakatholwa kuleli zwekazi kuze kube manje, luzokwenzeka "emahoreni alandelayo".
The I-World Health Organization (WHO) ithi inani elikhulu lezinguquko ezinhlobonhlobo ezisanda kutholwa liphakamisa ukukhathazeka okukhulu ngokuthi kuzoba nomthelela kanjani ekuxilongeni, ekwelapheni nasekugomeni.
I-UK iphinde yabekela imingcele ukuhamba ngezindiza ukuya nokubuya eNingizimu Afrika nakomakhelwane bayo, kanti i-Health Security Agency yezwe ithi "lokhu kuhluke kakhulu esike sakubona kuze kube manje."
Amazwe aphesheya kweYurophu nawo akhathazekile ngalokuhluka okusha, lapho iMalaysia, Japan, Singapore kanye neBahrain bebeka imingcele kubahambi abavela esifundeni esiseningizimu ne-Afrika.
Israel futhi ubeke ukuvinjelwa kokufika kusuka eningizimu ye-Afrika kodwa wabe esenweba leyo 'ndawo ebomvu' cishe kulo lonke izwekazi, ngaphandle kwamazwe athile asenyakatho ne-Afrika.